Posted by zeRoTraSh at 5:47 PM3comments
အဲဒါ မင်းမဟုတ်တဲ့ငါ . . .
Posted by zeRoTraSh at 5:08 PM2comments
Posted by zeRoTraSh at 5:15 PM 1 comments
ကျွန်တော့်ကို ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်လုို့ လူကြီးတစ်ယောက်က ပြောသွားတယ်။ ဒါကုို ကျွန်တော်လက်မခံနုိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ခေတ်ပညာတတ် တစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ အဝေးသင်တက္ကသုိုလ်ကနေ B.A Eco ဆုိုတဲ့ ဘွဲ့တစ်ခု ရထားတဲ့သူပါ။ အဲဒီ့ဘွဲ့ကိုလဲ စိတ်ပါလက်ပါသင်ပြီး ယူထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာမေးပွဲနီးမှ အနီးကပ်ဆုိုပြီးတက် ပြီးတော့ ဟုိုကူး ဒီကူးနဲ့ အောင်လာတာပါ။ အထင်ကြီးစရာ တစ်စက်မှ မရှိပါဘူး။ အထင်မကြီးလုို့လဲ ဘွဲ့ပေးတော့ တက်မယူပါဘူး။ အဝေးရောက်တောင် မလျှောက်ထားခဲ့ဘူး။ နောက်မှ ဘွဲ့လက်မှတ်လုိုတယ်ဆုိုမှ သွားထုတ်ထားတာ။ အဲဒီ့တော့ ခေတ်ပညာတတ် မဟုတ်တာ သိပ်ရှင်းနေပြီပေါ့။
အဲဒီ့ခေတ်ပညာတတ်ဆုိုတဲ့ စကားကုိုကြားတုိုင်း ကျွန်တော်မုန်းတယ်။ ကျွန်တော်တက်စရာ တက္ကသုိုလ် ဘယ်မှာလဲ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ငယ်ငယ်က စိတ်ကူးယဉ်သလုို တက္ကသုိုလ်ကျောင်းသားဘဝဆုိုတာ မကြုံဆုံခဲ့ရပါဘူး။ လူကြီးတွေကပြောတယ် ခေတ်ကုို ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်တွေကသာ ပြဌာန်းသတဲ့။ ဘုရားတမိပါတယ်။ သူတုို့ခေတ်မှာတော့ ဟုတ်မှာပေါ့။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ပြောပါလုို့ပဲ ပြောလုိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်တုို့ ဘယ်လုိုခေတ်ပညာတွေသင်ယူနေရသလဲ ဘယ်လုိုပညာတွေ တတ်နေပြီလဲ။ အင်္ဂလိပ်စာကုို အထက်တန်းကျောင်းသား ဖြစ်တဲ့အထိ စုစုပေါင်း ၁၁ နှစ်သင်ပြီး Yes No တောင် မကွဲတာ ခေတ်ပညာတတ်လား? တက္ကသုိုလ်တတ်တာ ကျောင်းမရောက်ပဲ ဖဲဝုိုင်းရောက် အရက်ဝုိုင်းရောက် ဟုိုရောက်ဒီရောက် ဂိမ်းဆုိုင်ရောက် ဒါတွေက ခေတ်ပညာတွေလား? ဘဝမှာ ရည်မှန်းချက်ဆုိုတာ ဘာလဲ ရည်ရွယ်ချက်ဆုိုတာ ဘာလဲ သမုိုင်းဆုိုတာ အရုပ်ရေးပြတာတောင် မသိတော့တာ ခေတ်ပညာတတ်တွေလား? အတ္တတစ်ခုကုို ရှေ့တန်းတင် နောက်တော့ ဒီ certificate လေးရရင် နုိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ရမှာပါ ကံတရားက ၇၀%လောက်ကောင်းရင် ရပြီဆုိုတဲ့ အတွေးတွေက ခေတ်ပညာတတ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေလား။
ဟုတ်တယ် အဲဒါတွေ အားလုံး ကျွန်တော် မတတ်ဘူး မသိဘူး။ ကုိုယ့်ဥိးနှောက်ပဲကုိုယ်သုံးတတ်တယ် အတွေးအခေါ်ကလဲ ခေတ်ပညာမတတ်လုို့သိပ်မတွေးတတ်ဘူး။ ဟုိုစာ ဒီစာ ဖတ်ပြီးမှ သိတဲ့ ယောင်ခြောက်ဆယ် အတွေးအခေါ်ပဲရှိတယ်။ တက္ကသုိုလ်လဲ မနေဖူးဘူး။ ကြက်တူရွေးနှုတ်တုိုက်စာတွေလဲ လက်မခံလုို့ မကျက်ခဲ့ဘူး။ ဘဝကုို certificate တွေ Diploma တွေနဲ့လဲ မတည်ဆောက်ဖူးဘူး။ ကျွန်တော် ခေတ်ပညာတတ်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပဲ . . .
Posted by zeRoTraSh at 12:15 PM3comments
Posted by zeRoTraSh at 11:00 AM3comments
ငယ်ငယ်တုန်းက ရည်းစားတစ်ယောက်ကုို မပေးဖြစ်လုိုက်တဲ့ စာလေး အဲဒီ့တုန်းက ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကုို သတိရသလောက် ပေါက်ကရပြန်ရေးထားတယ် အမှန်တရား ၅၀ သားနဲ့ မုသာဝါဒ ၅၀ သားရောထားတာပါ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပျင်းပြေဖတ်ပေါ့။
ကုိုယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ မနေ့က မလာဖြစ်တာကလေ မေမေက ကုိုယ့်ကုိုဆူနေလုို့ပါကွာ။ ကုိုယ်ဖုန်းဆက်ဖုို့ ကြိုးစားသေးတယ် ဒါပေမယ့် ဖုန်းနားတောင် မသွားရသေးဘူး ဖေဖေကထပ်ပြီး ကောပြန်ရော။ ကုိုယ်သနားပါတယ်ကွာနော် ချစ်လေးလဲ စိတ်မကောက်နဲ့တော့နော်။ ဘာလုို့ဆူတာလဲ ဟုတ်လား အင်း ပြောပြရမှာပေါ့နော်။ အမှန်အတုိုင်းပြောပြပါ့မယ် စိတ်တော့ နှစ်ထပ်ကွမ်းမကောက်နဲ့နော်။ ဒီလုိုချစ်လေးရေ တနေ့က ကုိုယ်က အိမ်ပြန်မအိပ်ဖြစ်ဘူးလေ သိတဲ့အတုိုင်းပဲ ချစ်လေးကုိုပြောပြထားသလုို သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ နာရေးရှိလုို့ သွားနေပေးတာ။ အဲဒီ့သူငယ်ချင်းက ဘယ်သူလဲလုို့ ချစ်လေးမေးသေးတယ်နော် အဲဒီ့နေ့က ပြောခဲ့သလုို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆုိုတာ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး အဲဒါ ကုိုယ့် အရင်ရည်းစားရဲ့ အမေဆုံးသွားလုို့ သူက လာခဲ့ပေးပါဆုိုလုို့ သွားပေးလုိုက်တာ။ စိတ်မဆုိုးနဲ့နော် အဲဒီ့နေ့က အမှန်အတုိုင်းပြောလုိုက်ရင် ကုိုယ့်ကုို မလွှတ်မှာစုိုးလုို့ အခုတော့ အမှန်အတုိုင်းပြောပြတာပါ။ အဲဒါ သူ့ကုိုအားနာတာနဲ့ သွားနေပေးတာ။ နာရေးအိမ်ဆုိုတော့ ညဘက် ခဏနေမယ်ဆုိုပေမယ့် သူတုို့က ဆက်နေပေးပါဆုိုလုို့ နေပေးလုိုက်တယ်။ သူ့ကုိုလဲ အားပေးနေရတာပေါ့။ ကုိုယ်လေ သူ့နားမှာ တချိန်လုံးနေရင် ချစ်လေး မကြိုက်မှာစုိုးလုို့ သူ့ဦးလေးတွေ ဖဲကစားနေတဲ့ ဝုိုင်းမှာ သွားထုိုင်ပေးလုိုက်တယ်။ ဖဲဝုိုင်းနားရောက်တော့ သူတုို့က အတင်းခေါ်တာနဲ့ ဝင်ကစားလုိုက်တာပါ။ ပိုက်ဆံအများကြီး ဟုတ်ပါဘူး နည်းနည်းပါးပါးပါ။ အစကတော့ နုိုင်တယ် ဒါပေမယ့် ရပ်လုိုက်ရင် အနုိုင်ပုိုင်းတယ်ဖြစ်မှာ စုိုးတာနဲ့ ဆက်ကစားပေးလုိုက်တာ ရှုံးသွားတယ်။ အရှုံးတော့ဘယ်ခံလုို့ ဖြစ်မလဲ ဟုတ်ဘူးလား ချစ်လေးရယ် ကုိုယ်က အဲဒါနဲ့ ပုိုက်ဆံချေးမလုို့ စဉ်းစားသေးတယ် ဒါပေမယ့် ပုိုက်ဆံချေးလုိုက်ရင် သိက္ခာကျမှာစုိုးတာနဲ့ လက်စွပ်ကုို ပေါင်လုိုက်တယ်။ အရင်ရည်းစားဟောင်းက အပေါင်ခံတယ်။ အင်းလက်စွပ်ကုို ပေါင်ပဲပေါင်တာပါ ဘယ်လက်စွပ်လဲဟုတ်လား အင်း ချစ်လေးရာ ကုိုယ်က ရွှေတွေဘာတွေ ဝယ်တတ်တဲ့ကောင်မှ မဟုတ်တာ ချစ်လေးဝယ်ပေးထားတဲ့ လက်စွပ်လေးပေါ့။ စိတ်ဆုိုးနဲ့နော်။ အဲဒီ့လက်စွပ်ပေါင်ပြီး ပြန်ရုိုက်တော့ ချစ်လေးရေပုိုဆုိုးသွားတယ်။ ထပ်ရှုံးပြန်ရော အဲဒါ ချစ်လေးဝယ်ပေးထားတဲ့ လက်စွပ်ဆုိုတော့ အဆုံးအရှုံးမခံနုိုင်ဘူးလေ သိတယ်မလား ကုိုယ်ဒီလောက်မြတ်နုိုးတဲံ လက်စွပ် အရင်ရည်းစားလက်ထဲမှာဆုို ချစ်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစုိုးတော့ သူ့ဦးလေးဆီုမှာ ကားကိုပေါင်လုိုက်မိတယ်။ ကားကတော့ အမေတုို့ ဝယ်ပေးထားတာဆုိုတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒါ ကားပေါင်လုို့ရတဲ့ ပုိုက်ဆံနဲ့ဆက်ကစားတော့ နုိုင်မလုိုလုိုဖြစ်ပြီး အကုန်ကုန်သွားရော ဒေါသကလဲ ထွက်တာနဲ့ ကားပါထားခဲ့ပြီး ပြန်လာလုိုက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ့မနက်အစောကြီးက ကုိုယ်အင်းလျားလမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတာကုို ချစ်လေး အဖေမြင်သွားတာပေါ့။ သူက လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာလား ဆုိုတော့ အင်းဆုိုပြီး ညာလုိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ ချစ်လေးအဖေက ကုိုယ့်ကုို ကားမပါဘူးလား ဒီလောက်အဝေးကြီးဆုိုပြီးမေးတော့ ကုိုယ်က ကားပျက်နေလုို့လုို့ ပြောလုိုက်တာ သူက ချစ်လေး မွေးနေ့မှာ သွားစရာမရှိမှာစုိုးလုို့ ကားပေးမယ်လုို့ ပြောတယ်လေ။ ကုိုယ်လဲ အားနာတာနဲ့ ချစ်လေးတုို့ အိမ်ကကားကုို ယူထားလုိုက်တယ်။ ချစ်လေးကတော့ ဘယ်နိုးဦးမလဲ အစောကြီးကုိုး။ အဲဒါ ချစ်လေးအဖေကုို ကုိုယ်က ရေပြန်ချိုးဦးမယ်လုို့ ပြောထားလုိုက်ပြီး အိမ်ပြန်တာပေါ့။ အမေတုို့ကတော့ မေးတယ် ကားဘယ်မှာလဲတဲ့ အဲဒါပြောလုိုက်တယ်လေ ချစ်လေး အဖေက ကားလဲစီးမယ်ပြောလုို့လဲထားလုိုက်တယ်လုို့ သူတုို့ကတော့ ဘာမှ မပြောဘူး။ အဲဒါရေချီုးပြီး ချစ်လေးစီလာမလုို့ပဲ ဟုိုအရင်ရည်းစားက လက်စွပ်ပြန်လုိုချင်ရင် သူ့ကုို မနက်စာကျွေးရမယ်ဆုိုတာနဲ့ ကုိုယ်လဲ သူ့ကုိုသွားခေါ်ပြီး ကျွေးလုိုက်တယ်။ အဲဒါလေ သူက စိတ်ညစ်လုို့တဲ့ ကားလဲမောင်းချင်တယ်ပြောတော့ ချစ်လေးအဖေကားကုို ကုိုယ်လဲ ပေးမောင်းလုိုက်မိတယ်။ အဲဒါသူမောင်းရင်းနဲ့ သူ့အိမ်နားရောက်တော့ ဘရိတ်နဲ့ လီဗာမှားနင်းလုိုက်တာ ချစ်လေးအိမ်ကကား ခေါင်းနည်းနည်းထိသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့်ကုိုယ်ချစ်လေးကုို အဲဒီ့နေ့က လာမတွေ့ဖြစ်တာပါ။ ကားသွားပြင်တော့ ပုိုက်ဆံက မရှိဘူး အမေတုို့ဆီက တောင်းလုို့လဲ မဖြစ်တာနဲ့ ဝပ်ရှော့နားက ချစ်လေး အဒေါ်ဆီက ပုိုက်ဆံချေးပြီး ပြင်လုိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေတုို့ကမေးတာနဲ့ ပြောပြလုိုက်လုို့ ဆူနေကြတာ။ တကယ်တော့ ကုိုယ်က ချစ်လေးဆီလာဖုို့ ကြိုးစားနေတာပါ သူတုို့လုပ်လုို့နော်ချစ်လေးနော် ကုိုယ့်ကုို ခွင့်လွှတ်နော် စိတ်ကောက်နဲ့တော့။
PS: ဟုိုလေ လက်စွပ်ကလေ ဟုိုအရင်ရည်းစားက ကားတုိုက်မိတုန်းက ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ဆင်းပြီး ဟုိုဟာလုိုလုို ဒီဟာလုိုလုို လုပ်လုိုက်တာ ပျောက်သွားတယ်။ အိမ်ကကားလဲ အခုဆုို ကုိုယ့်အဖေသွားရွေးနေတယ်။ ချစ်လေးအဖေကတော့ ချစ်လေးအဒေါ်ကုို အကြွေးဆပ်ပြီး သူ့ကားသူ ပြင်လုိုက်တယ်တဲ့ စိတ်မပူနဲ့တော့နော်။
Posted by zeRoTraSh at 5:04 PM 1 comments
ကျွန်တော့်ကိုမေ့နေကြတယ် ထင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘလော့ဘက် လှည့်မကြည့်ဖြစ်တော့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ခေတ်နဲ့များ အဆက်ပြတ်သွားသလား ထင်မိသေးတော့တယ်။ ရေးထားတာတွေတော့ ရှိတယ် မတင်ဖြစ်တာ။ မတင်ဖြစ်ဆို ရန်ကုန်ရောက်ပြီးကထဲက ကော်နက်ရှင်က စိတ်ချမ်းသာစရာ တစ်စက်မှ မရှိသေး။ ပြန်ရောက်တာတော့ ကြာပေါ့။ အလုပ်ကလဲ ရှုပ်သလိုလို မရှုပ်သလိုလိုနဲ့။ ဘာကလိုတိုတိုပေါ့လေ။ ကျန်းမာရေးလဲ ကောင်းပါတယ်။ စီးပွါးရေးလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ အားလုံးလဲ ကျန်းမာချမ်းသာနေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကဲ မိတ်ဆွေတွေကို ဒီကနေပဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ် အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေလို့။ နောက်ရက်များမှ ပို့စ်တင်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်ကို မေ့နေကြတယ် မဟုတ်လား :P
Posted by zeRoTraSh at 4:09 PM6comments